Ubume buhambelana nobuso.
Ngcono imaski ilingana nobuso, ibangcono isiphumo sokuzikhusela, kuba ifuthe lokuzikhusela kwimaski linento yokwenza ebusweni xa unxibe imaski. Ukulunga kufanelekile, umoya ongaphandle kwemaski akukho lula ukuba ungene kumda we-mask ukuya kwimaski, ngaphakathi komzimba womntu.
Ukusondela kwimaski ayisiyonto ibhetele, ezinye iimaski zinxiba ukumelana nokuphefumla zinokubangela ukonakala kwenkqubo yokuphefumla komntu. Ke zama kwimask xa ukhetha enye kwaye uyicinezele ebusweni bakho ukuziva ukuba unengxaki yokuphefumla.
Imask ine-permeability elungileyo kakhulu, ayiyi kubangela ukuba umphefumlo womntu ungakhululeki, ngaxeshanye eluthulini kwaye izinambuzane ezincinci zinesiphumo esihle sokuzahlula, kunjalo ukhetho olufanelekileyo, kodwa khumbula ukukhetha umenzi omkhulu we-oh.